[XOG] Shirka oo gelinka danbe ee maanta furmaya iyo Madaxweynayaashii hore oo ka qeyb galaya - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Shirka oo gelinka danbe ee maanta furmaya iyo Madaxweynayaashii hore oo...
[XOG] Shirka oo gelinka danbe ee maanta furmaya iyo Madaxweynayaashii hore oo ka qeyb galaya
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa Shirka Qaran ee Wadatashiga Doorashada oo maanta la filayo inuu ka furmo caasimadda Muqdisho.
Shirka ayaa la sheegay inuu si hordhac ah u furmayo iyadoo uu ka maqan yahay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo arrimo tacsi ah dartood dib u dhac ku yimid imaanshihiisa Muqdisho, lana filayo Jimcaha gelinka danbe.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa lagu wadaa inay maanta soo gaaraan Muqdisho, iyadoo gelinka danbe la qabanqaabinayo munaasabad furitaan oo hordhac ah, waxaana shirka rasmiga ah la filayaa inuu furmo Sabtida
Shirka wuxuu furmi doonaa Sabtida 22-ka bishan May, waxaana ka wada qeyb galaya madaxda maamul Goboleedyada, G/Banaadir, madaxweynayaashii hore iyo guddoomiyaha Aqalka Sare, halka madaxweynaha xilkiisu dhammaaday Maxamed Farmaajo uu isna ku biiri doono shirka.
Qabanqaabada shirka waxaa wada xafiiska Ra’iisal wasaaraha, waxaana jira arrimo aan weli go’aan laga gaarin oo ay ka mid yihiin shir guddoonka Shirka iyo ajendayaasha shirka oo kulamada hore go’aan looga gaari doono.